Birhaanuu Naggaa: "Seer-maleessummaa hamaan uumamuu danda'a" - BBC News Afaan Oromoo
Birhaanuu Naggaa: "Seer-maleessummaa hamaan uumamuu danda'a"
Walitti bu'iinsi kutaalee biyyattii gara garaa keessatti mudachaa jiruun wal qabatee nagaafi tasgabbii dhabuu yeroo gara yerootti dabalaa jiru daran yaaddessaa ta'uu hogganaan IZEEMAA Pirofeesar Birhaanuu Naggaa himan.
Pirofeesarichi kana kan jedhan filannoo barana gaggeeffamu hordofuun faayidaalee argamuufi balaa uumamuu malu ilaalchisee yaadaafi waamicha dhiyeessaniiniiru.
Walitti bu'iinsi kutaalee biyyattii gara garaa keessa jiruufi nagaafi tasgabbiin dhabamuun dhaaba isaanii IZEEMAA daran yaaddessa jedhan.
Kanarraa ka'uunis odeeffannoo miseensota isaafi qaamolee adda addaa irraa walitti qabe bu'uura godhachuun hubannoo waloo biyyaalessaa uumuufi, mariin akka eegalu qaamota dhimmichi ilaallatuuf waamicha gochuu himan.
'Nutii aadaa siyaasaa haaraa beeksiisuuf yaalaa jirra'
Yaalii biyya ijaaruu Itoophiyaan baroota darban keessa dabarte keessatti sirna diimokiraasii ijaaruu caalaa sirna ilaalcha dhiphaa sanyii qofarratti xiyyeeffateen hawaasa gidduutti loogii uumu ijaarameera jedhan.
Itoophiyaan wayita ammaa marroo sadaffaaf adeemsa jijjiiramaa keessa jirti kan jedhan Pirofeesar Birhaanuun, "jijjiiramni ammaa kun gara sirna diimokiraasii tasgabbaa'aatti nu geessamoo hin geessu kan jedhu hin beekamu," jedhan.
Walitti bu'iinsaafi buqqa'uu iddoo gara garaa jiruufi sodaa filannoon dhufu hawaasa keessatti uume akka sababaatti kaasu.
Jijjiiramaafi danqaalee mudatan
Jijjiiramni ammaa kun caasaa duraan ture guutummaatti diiguun osoo hin taane, sududaan sirreessuufi wantoota gaarii jiran itti fufsiisuu irratti xiyyeeffate jedhu.
Haata'u malee, humnoonni kaayyoo adda addaa qabatanii gara biyyaa deebi'aniifi namoonni dhuunfaa jijjiiramicha deeggaruuf gara biyyaa deebi'anii sadarkaa adda addaatti mootummaa waliin hojjechaa jiran faallaa jijjiiramichaa hojjechuu eegaluu dubbatu.
Humnoonni kunneen osoo mootummaan jiddugaleessaa humna hin jabeeffatiin, hawaasni jijjiiramicha irraa abdii kutatee "mootummaan hin jiru", seer-maleessummaan dagaagaa jira sodaa jedhuun sanyii/sabaan gurmaa'uu jibbee ture jalatti akka deebi'u yaalii godhaniiru jedhu.
Sochii akkanaa keessatti qaamolee sadiitu hirmaata jedhu pirofeesarichi.
Isaanis humnoota sirna darberraa fayyadamoo turan, humna jijjiirama fedhu garuu 'miira abbaan dabaree' ana jedhuun naannoo isaa bulchuu barbaadu, akkasumas humna gonkumaa jijjiirama kanarraa amantaa hin qabne jedhan.
Humni inni sadaffaan kun osoo jijjiiramni ammaa kun hundee hin godhatiin mormii kaasuun hogganoonni jijjiiramichaa uummata biratti fudhatama akka hin arganne, akkasumas gahumsa akka hin qabne uummata amansiisuu fedhu jedhan.
Humni kun galmi isaa mootummaan ce'umsaa qaamolee hunda irraa walitti bahe akka dhaabbatu gochuudha jedhu.
Humnoonni sadan galma waloo 'mootummaa dhaddabsiisuu' jedhu waan qabaniif waliin dalaguu danda'us jedhu.
FIlannoo itti aanurratti uummanni bilisaan nama bakka na bu'a jedhu hin filatu yoo ta'e walitti bu'iinsiifi hokkarri baatilee 18 darban keessa argine daran hammaatee kufaatiin uumamuu hin oolu jedhu.
Bakka bu'ummaan isaanii uummataan kan hin mirkaneeffamneef qaamoleen "bakka bu'oota uummataa" ofiin jedhan humnaan bakka bu'ummaa isaanii mirkaneeffachuuf yaalu jedhan.
Hokkarri sababa kanaan uumamu kan qaama tokkoo qofa osoo hin taane, "osoon hin durfamiin dursuun qaba" ilaalcha jedhuun hunduu wal diinomfatee wal balleessuuf kan itti socho'u ta'a jedhu.
Naannoleen sanyiin ijaaraman wal waraanuuf kan hidhatan, naannolee sanyiin ijaaraman kana keessas gareeleen adda addaa 'yeroon kan kooti' ilaalcha jedhuun wal ijaaran wal waraanuun seer-maleessummaa hamaan uumamuun isaa waan oolu miti jedhu.
Jijjiiramni ammaa kun kan fashalu yoo ta'e bara dukkanaa waggoota 100 dura turetti nu deebisa, akka biyyaatti itti fufuunuu rakkisaa ta'uu mala jedhu Pirofeesar Birhaanuun.
Ummanni sadarkaa adda addaatti ofiin of-buclhuu qaba yaada jedhu humni siyaasaa mormu Itoophiyaa ammaa keessa hin jiru jedhu Pirofeesar Birhaanuun.
Garaagaraummaan kan jiru sirna federaalawaa hin waalta'iin jechuun maal jechuudha kan jedhurratti akka ta'e dubbatu.
Sirna federaalaa keessatti sadarkaa gandaa eegalee bulchiinsi mootummaa hoggantota jiraattotaan filatamaniin bula. Kana jechuun dhimmi bulchiinsaas ta'e misoomaa hogganoota uumatni bakka buufateen murtaa'a.
"Itoophiyaa keessatti garuu humnoonni sabaan ijaaraman qajeeltoo waggoota dheeraaf qabsaa'aniifillee hojiirra oolchuuf hayyamamoo miti jedhan.
Namootni naannoo isaaniin alaa dhufan naannicha keessaatti mirga homaatuu akka hin qabnetti fudhatu jedhan.
Ilaalchi akkanaa biyya jiru keessatti namoonni saba adda addaa ta'an tokkummaa biyyaalessaa uumanii waliin jiraachuun rakkisaadha jedhu.
Lammileen naannoo keessa jiraatan, bultiifi qabeenya keessatti horatan keessa nagaan jiraachuu hin danda'an yoo ta'e akkamiin lammii biyya sanaa jedhanii of waamuu danda'u jechuun gaafatu.
Filannoon dhufu rakkoolee keenya furuuf jalqabbii ta'a kan jedhan pirofeesarichi, amanamaa akka ta'uufi murteen ummataa sirriin kan ittiin beekamu akka ta'u garuu haal-dureewwan guutamuu qaban jiru jedhu.
Qaamoleen yaada qabna jedhan kutaalee biyyattii kam keessayyuu bilisaan socho'anii, danqaa tokko malee hawaasa walitti qabanii mariisisuu danda'uu qabu jedhu.
Warri filatanis nama fedhan waan filataniif rakkoon akka irra hin geenye wabii qabaachuu qabu jedhan.
Caasaaleen mootummaa sadarkaa gadiirra jiran qaamoleen nageenyaafi dargaggoota gurmaa'an waliin ta'uun walgahiiwwan paartilee siyaasaa gufachiisuu, miseensota mormitootaa hidhuufi doorsisuun dhaabachuu qaba jedhan.
Paartii biyya bulchaa jiruuf maallaqa walitti qabuufi maqaa jedhuun hawaasni daldalaa xalayaa chaappaa Abbaa Taayitaa Galiiwwanii qabuun daldaltoonni Paartii Badhaadhinaaf qarshii akka kennan gaafatamaa jiru jedhan.
Haalli kun morkiin paartilee siyaasaa jidduu jiru kan wal gitu akka hin taaneefi malaammaltummaa filannoo booda uumamuuf karra kan banudha jedhan.
Gaheen paartiifi mootummaa wal makuun isaas rakkoo biraa filannoo dhufu danquu danda'u ta'uu himan.
Akkuma hojilee gaarii hojjeteef humna jijjiiramaa kana dinqisiifataa turre, filannoon dhufu amanamummaa kan hin qabneefi bilisa ta'uu yoo dhabe isaanitti quba qabuu hin dhiifnu jedhan.
Abbootii humna caasaa mootummaa sadarkaa gadii jiran to'achuun hin danda'amu yoo ta'e haala amma jiruun filannichi kan bakka buutonni ummataa dhugaa itti filataman ta'uu hin danda'us jedhu Pirofeesar Birhaanuun.
Rakkooleen amma jiran akkanumaan itti fufnaan filannoo gufachiisuu mala, filannoon gufannaan ammoo biyyattiin gara balaa sodaachisaatti seenuun ishee waan hin oolle jedhan.
Itoophiyaa: MM Abiy daangaa amantii fi mootummaa jidduu jiru ce'anii?
Indiyaatti manaa bahuu dhorkuun rakkoo hamaa biraa dhale